Barcelona, Chelsea, Borussia Dortmund oo guulo gaaray & dhamaan natiijooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 11 Dis 2019. Waxaa caawa la ciyaaray kulamda lixaad ee heerka group-yada tartanka xiisaha badan ee Champions League, iyadoo kooxihii caawa ciyaaray ay ugu muhiimsanaayeen, Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Napoli iyo Liverpool.
Kooxda reer London ee Chelsea ayaa caawa guul mihiim ah ka gaartay dhigeeda Lille, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, waxayna goolasha kaga mahadcelineysaa xiddigaheeda kala ah, Tammy Abraham iyo Cesar Azpilicueta.
Dhinaca kale kooxda reer Talyaani ee Napoli ayaa guul weyn ka gaartay dhigeeda Genk, waxayna kaga adkaatay 4-0, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda Arkadiusz Milik oo saddex gool dhaliyay iyo Dries Mertens.
Kooxda Barcelona ayaa dhankeeda guul kaga soo gaartay naadiga Inter oo ay ku booqatay garoonka Giuseppe Meazza, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, waxaana goolasha u kala dhaliyay Carles Perez iyo Ansu Fati, Nerazzurri ayaana sidaas ku macsalaameysay tartanka Champions League.
Liverpool oo guul ay ka gaartay Salzburg ku soo xiratay heerka group-yada ee tartanka Champions League…+SAWIRRO